अनमोल केसी नया फिल्म 'धुपौरे' मा अनुबन्धित, को होला उनिसंग अनस्क्रिन रोमान्स गर्ने नायिका ? - www.dthreeonline.com
अनमोल केसी नया फिल्म ‘धुपौरे’ मा अनुबन्धित, को होला उनिसंग अनस्क्रिन रोमान्स गर्ने नायिका ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन ०७, २०७६ समय: ११:११:३४
ईटहरी/ अभिनेता अनमोल केसीले नयाँ चलचित्र साइन गरेका छन् । मंगलबार ‘त्यान्द्रो’ फेम्ड निर्देशक साम्तेन भुटियाको नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने उनले सम्झौता गरेका हुन् । चलचित्रको नाम ‘धुपौरे’ राखिएको छ । चलचित्र डार्क एक्सन-लभस्टोरी जनरामा निर्माण हुने जानकारी प्राप्त छ । तिहारपछि छायांकन सुरु हुने यो चलचित्रको मंगलबार दिउँसो लोगो सार्वजनिक गरिँदैछ । गत वर्ष चलचित्र ‘अनागत’ को एक कार्यक्रममा निर्देशक भुटियाले आफूले नयाँ चलचित्र अनमोललाई अफर गरेको खुलाएका थिए । सबै कुरा मिले टिमअप हुनसक्ने उनको भनाई थियो ।
अन्ततः ‘धुपौरे’ मा दुईबीच टिमअप भएको छ । चलचित्रमा अहिलेसम्म अनमोलबाहेक अरु कलाकारको टुंगो लागेको छैन । अब बाँकी कलाकारको छनोट प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा निर्माण टिम छ । यो चलचित्रमा अनमोलले ५० लाखको आसपासमा पारिश्रमिक बुझेको स्रोत बताउँछ । तर, यसबारेमा निर्माण टिमबाट कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । फरक धारका चलचित्र बनाउने निर्देशकको रुपमा चिनिएका साम्तेनको नयाँ चलचित्र ‘च च हुई’ आउँदो मंसिर ६ गते प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
‘धुपौरे’ उनको ड्रिम प्रोजेक्ट बताइएको छ । गएको वर्ष प्रदर्शनमा आएको ब्लकबस्टर चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ पछि अनमोलले बाहिरी ब्यानरको चलचित्र साइन गरेका थिएनन् । उनी आफ्नो होम प्रोडक्सनको चलचित्र ‘एन्टी हिरो’ गर्ने तयारीमा थिए । तर, यो चलचित्रको छायांकन सुरु हुन केही ढिलाई हुने भएपछि उनले साम्तेनको ‘धुपौरे’ गर्न लागेका हुन् । केही दिनमा यो चलचित्रको औपचारिक निर्माण घोषणा गरिँदैछ ।